Ministra Maleziàna : “Hampikorotan-Tsaina Ny Olona” Ny Gazety Maro Loatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2019 8:07 GMT
Antony roa no narosony rehefa nolavin'ny manampahefana Maleziàna ny hamoahan'ireo vohikalambaovao malaza FZ Daily sy Malaysiakini gazety mpiseho isanandro : voalohany, fikasan'izy ireo ny hanaramaso ny gazety mpiseho isanandro ao amin'ny firenena ; faharoa, nilaza izy ireo fa mba hahazoana mpamaky bebe kokoa dia manao filazam-baovao “manaitra sy miteraka resabe” ireo vohikala roa ireo amin'ny tatitra ataony .
Tamin'ny famaliana ny fanadihadiana parlemantera natao ny volana lasa teo, no nanazavan'ny Minisitry ny Atitany Ahmad Zahid Hamidi fa efa ampy ny isan'ny gazety ary “hampikorotan-tasina ny olona” ny fitombony :
Dingana iray ho amin'ny fanarahamaso ny fitosaky ny gazety mpiseho isanandro ny fandàvana ny fangatahana nataon'ny FZ Daily sy Malaysiakini izay mety hampikorotan-tsaina ny olona raha maro loatra ny vaovao avoakan'ireo gazety isan-karazany.
Nampangainy ho mpanao gazety tsy tomponandraikitra ihany koa ireo vohikala roa ireo :
Heverina ho mirona [ni] amin'ny famoahana vaovao mampientanentana sy mahabe resaka mba hisarihana ny sain'ny mpamaky izy ireo.
Toniandahatsoratry ny Malaysiakini, Premesh Chandran. Sary avy amin'ny Malaysiakini.
Voalohany, nandefa fangatahana hanao gazety printy aloha ny Malaysiakini ny taona 2010. Nanomboka tamin'izay izy no nanohitra ny didy jadon'ny Minisiteran'ny Atitany ary nahazo ny rariny tao amin'ny Fitsarana Ambony, saingy tsy mbola nanao fangatahana vaovao. Nandritra izany, nahazo fahazoandalàna hanao gazety ny FZ Daily ny volana Aogositra lasa teo, saingy notsoahana indray ny fahazoandàlana herinandro taorian'izay. Nahazo rariny avy amin'ny fitsarana izy ny volana Febroary lasa teo, saingy nolavin'ny Minisitera io andro io ihany.
Vao tamin'ny volana lasa teo ny Ministera vao nanambara ny antony nandavan'izy ireo ny fangatahan'ny FZ Daily sy Malaysiakini.
Ho an'i Dr. Mustafa K. Anuar avy amin'ny vondrona Aliran mpiaro ny zon'olombelona, io fanapahankevitry ny minisitra io dia “fanoherana ankitsirano ny zo demokratikan'ny vahoaka amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy ny fahalalahana haneho hevitra.” Hoy izy nanampy tao amin'ilay fanambarana natao an-gazety nataon'ny fikambanana :
Tsy manamarina ny fieboebon'ny governemanta amin'ny filazany fa i Malezia no “demokrasia tsara indrindra erantany” ny fihetsika tsy ara-drariny sy tsy ara-demokratika ataon'ny Minisitera. Vao mainka aza, maneso ny filazan'ny governemanta izany ary manamafy ny fahatsapan'ny vahoaka fa kasain'ny governemanta ny hamoritra sy handà ny fahalalahan'ny Maleziana.
Ny lazaina fa ahiahy tahaka ny hoe “mikorontan-tsaina ny olona” no nanjary lasa tsianjery malaza teo amin'ireo manampahefana sady natao ho fialantsiny hanaovana sivana na handàvana hevitra– na izany ara-politika, na ara-pinoana, na ara-toekarena na ara-kolontsaina – mampiseho ny fihatsarambelatsihy sy ny fisainan'ireo mpitarika izany.
Ny governemanta tokony hanana fahatokisan-tena bebe kokoa amin'ny fahamatorana sy fahiratan-tsaina ananan'ireo Maleziana hanavaka ny tatitra manintona amin'ny fanaovana gazety mitatitra ny zava-misy amin'ny fomba hafa.
Nanasongadina ny ilàna ny hanavaozana ny Lalàna fanontana pirinty sy ny fampahalalam-baovao na ny Presses and Publications Act (PPPA 1984) ihany koa ilay olana, izay manome vahana ny ministera hanome, hitsiipaka sy hampiato fahazoandàlana hanao gazety, nefa nampiasaina ihany koa mba hilàna vaniny amin'ireo fikambanana politika. Ohatra, nanaiky ny lalàna ny governemanta rehefa nanala ny fahazoandàlan'ny Suara Keadilan, ilay gazety ofisialin'ny antoko mpanohitra People’s Justice Party.
Tany am-piandohan'ity taona ity, nanohitra ny fanapahankevitry ny governemanta hanakana ny fahazoandàlan'ny gazetiboky The Heat ireo mpanao gazety Maleziana, izay nitantara ireo fahazarana mandany vola nataon”ny Praiminisitra sy ny fianakaviany.
Ny The Southeast Asian Press Alliance na ny Fikambanamben'ny Mpanao Gazety Ao Azia Atsimo Atsinanana dia mino fa ny fandresen'i Malaysiakini teo anatrehan'ny fitsarana no hampahatsiahy ireo manampahefana fa “ny famoahana dia zo fa tsy tombontsoa” :
Dingana lehibe eo amin'ny tantaran'ny fahalalahan'ny fanaovana gazety ao Malezia ny fandresen'i Malaysiakini teo anatrehan'ny fitsarana. Tsy noho ny amin'ny fijerena ny sotasota nataon'ny governemanta ihany, fa koa noho ilay filazana ny didim-pitsarana hoe “zo fa tsy tombontsoa” ny asa fanontàna.
FZ Daily, miaraka amin'ireo filazambaovao maro hafa tsy miankina anaty aterineto, dia samy manao izay hitazonana ny filazambaovao efa misy manoloana ny filazambaovao mpanara-drenirano sy mpanaraka baiko izay nahazo tombontsoa tamin'ny famoretana ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety teo ambany fifehezan'ny PPPA.
Herintaona taorian'ny fifidianana, nieboebo ho demokrasia ny governemanta noho ny fitsabahany mitohy hatrany mba hampihenana ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety, ankoatra ireo fahalalahana sivily hafa.
Tsy manam-paharoa ny tranga ao Malezia raha amin'io lafiny io : raha toa ny ankamaroan'ny firenena any amin'ny faritra mahita gazety voakatona noho ny fahitàna ny aterineto ho modely tokana, mitady ny mifanohitra amin'izany indray ireto vohikala ireto. Ny faneriterena ataon'ny governemanta amin'ny famoahana fahazoandàlana hanao asa fanontàna dia toa manondro fa mbola mitazona endrika fahefana iray ao anatin'ny fiarahamonina Maleziana ny filazambaovao an-tsoratra.